Version 0.9.0 – Vonona, toe-javatra, mandeha!
Desambra 12, 2012 amin'ny tolotra 9 Comments
Ao amin'ny 12/12/12 (ny zavatra tsara tarehy daty) amin'ny 20:12 (fotoana mety tsara). Efa namoaka dikan- 0.9.0 ny plugin. Io dikan-nahitana Avereno soratana lehibe ny toe-javatra sy ny fitantanana pejy. Mifindra avy amin'ny tokana halavitry ny pejy amin'ny ô safidy maro ny slick tabbed interface tsara.
Izany dia tsy dikan-tarehy, fa izany koa ny lafin-javatra lehibe roa afaka ny toe-javatra efa mandroso vaovao vakizoro:
1. Fampidirana ny debugging fanohanana: Ankehitriny isika, dia ho afaka hanome anao fanohanana bebe kokoa mampiasa ny plugin fahaizana mamoron-hazo, ary hamela mitokana debugging.
2. Efa mandroso parsing fitsipika: Endri-javatra izany dia mamela anao hanova ny fomba ireo andinin-teny ho an'ny fandikan-teny efa tapaka eo amin'ny toerana. Dia mamela ny be sy ny fanomezana toerana tsara kokoa granulation ny maotera ny fampiasana manokana tranga.
Na izany aza – ho fampitandremana, ireo endri-javatra, na dia voasedra tsara dia marika avo lenta sy ny fanandramana. Mampiasa azy ireo raha tsy anao izay ataonareo.
Misy lafin-javatra hafa maro sy ny bibikely fixes tafiditra, fa maro tamin'izy ireo mendrika ny lahatsoratra, fa ho amin'izao fotoana izao, navelany handeha ny fiovana vatan-kazo:
* Ny teny vaovao mifototra amin'ny fisafidianana anaty filatron-dahatsoratra select2 (Very tsara Select boaty amin'ny saina)
* Koa Ctrl fanalahidy ho an'ny Fikarohana haingana ny teo aloha / manaraka biriky (Haingana kokoa ny miara-miasa amin'ny interface tsara)
* Ny safidy vaovao izay mamela ny Reset ny fanahafana ny recommanded rakitra defaults
* CSS fixes roa-polo foto-kevitra roa ambin'ny folo
* Tsy Loading ny subwidgets ao amin'ny Admin pejy
* Nesorina hafa, na ovaina sy viewable fiteny, izao ny teny ihany no ho mavitrika na manan-kilema
* Fanavaozana jQueriUI ho 1.9.2 (jQuery tokony izao ho 1.6+)
* Fixes ny Z-fanondroana ny fomba taloha dropdown (patch amin'ny chemaz)
* Fixes ny bibikely amin'ny efa voavitrana tsotra Shinoa nentin-drazana,
* Manamboatra bibikely manakana hanatsarana avy antitra be dikan-
* Hanafoanana ny manamarika rehefa Widgets no namoronana mivantana amin 'ny asa
* Tsy rewriting urls ao amin'ny Default teny, indrindra nampihatra canonicals
* Ilaina ny teny, rehefa mamela ny anaty filatron-dahatsoratra fametrahana ny Default teny
* Farany namaha ny olana amin'ny MSN mandika sy CR / LF
Ao ny andro manaraka ny famoahana voalohany, Bibikely telo no tsy voadinika sy raikitra, raha zavatra tsotra dia tsy miasa, Ataovy azo antoka ny hamelombelona ny rakitra.
Nametraka Under: Release filazana, Software Updates Tagged Miaraka: 0.9, bugfix, debug, lehibe, parser, fanafahana
Version 0.6.0 – Ny fandehanana haingana kokoa avy amin'ny fifadian-kanina ho
Jolay 29, 2010 amin'ny tolotra 6 Comments
fa ankehitriny dia haingana haingana kokoa
Io dikan-dia famoahana lehibe, ary misy zavatra vaovao betsaka izany fanafahana. ka mamela mahazo ny lisitry ny entana
Ary misy fanohanana ho an'ny fandikan-teny batch fiara izay mahatonga ny fandikan-teny ary manatsara mpampiasa haingana traikefa, teo aloha dia mba hampidiran'izy Transposh soratra avy amin'ny fandikan-teny samihafa backends fiara ary avy eo dia ho iterate amin'ny andian-teny tsirairay mba hahazoana teny, ankehitriny ireo dia mivondrona hiara-fampihenana ny isan'ny fangatahana natao, ny zava-misy fa tsy misy soratra ivelany no be pitsiny sy Loading mampihena hafainganam-pandeha kokoa.
MSN (Bing) mpandika teny intsony no mitaky ny fanalahidy, rehefa manana upgrades ny API, ary mifamadika ny fampiasana taratasy fangatahana manan-danja, Amin'izao dia afaka mifidy fotsiny ny fandikan-teny Default maotera amin'ny sitrapony, raha tsy misy maotera ho fiteny – Transposh dia nampiasa ny fampiasana ny iray hafa.
Transposh Google Proxy dia izao tafiditra mba hahafahan'ny fandikan-teny ho an'ny ambaratonga Alfa teny avy amin'ny Google (amin'ny 5 fiteny vaovao tohanan'ny – Armeniana, Azerbaijani, Basque, Géorgie sy Urdu) – taratasy fanomezam-pahefana io dia hita ao amin'ny plugin, ary ny fihodinana fangatahana ho an'ny Google handika teny avy amin'ny lohamilina mamela ny soratra hampiasa azy ireo. Izany dingana izany dia miadana – Mampitombo ny enta-mavesatra amin'ny lohamilina – ary tsy dia soso-kevitra amin'ny ankapobeny, ary dia ho foanana toy ny vao Google hahafantarana ireo fiteny amin'ny besinimaro. Fa raha mila maika handika ny toerana ho an'ny vahoaka Azeri, ianao, fara fahakeliny, dia afaka manao izany.
Ny Transposh Logo sy Backlinks izao hesorina tsy ho anaty filatron-dahatsoratra, raha mifidy izany safidy – Transposh dia hiezaka hitady vola kely ny toerana efa misy dokam-barotra eo amin'ny pejy ihany no nadika, vola io dia manampy antsika amin'ny ezaka fampandrosoana, raha donâ € ™ ny te ho very vola avy amin'ny dokam-barotra, tandremo fotsiny ny rohy. Ny teny dia readable eto.
Ny fandikan-teny ihany koa ny bokotra rehetra revamped, ary tokony ho haingana be mampiasa batching.
Ny mahazatra fixes anjara ny bibikely eto, ary te hisaotra Rogelio sy Marko noho ny fanehoan-kevitra sy ny fandraisana anjara mahay ny manamboatra ireo Bibikely. Ny fiezahana natao tamin'ny plugin lohapejy fahadisoana, fa tahaka ny Kana € ™ ny miteraka izany no donâ € ™ ny hahafantatra raha toa ka miasa, ka namakivaky ny rantsan-. Raha fanafahana io no mafy ho anareo tapaka, azafady tatitra izany amin'ny fanehoan-kevitra eto, mamorona tapakila ho antsika ao amin'ny Trac. Bug antsika eo amin'ny kaonty twitter na ny pejy facebook na amin'ny alalan'ny fiantsoana ny finday, kokoa amin'ny 3 aho. Afaka foana ny teo aloha iverenana ny dikan-, dia tsy tohina.
Nametraka Under: Release filazana, Software Updates Tagged Miaraka: Bing (MSN) mpandika teny, lehibe, fiteny maro, fanafahana, hafainganam-pandeha enhancements, WordPress plugin